ငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်း
Posted by ဇွဲမာန်(အင်းဝ) on Nov 12, 2012 in My Dear Diary |4comments
လက်တွေရောခံစားလိုက်ရပြီဆိုတော့ ကောလာဟာလကြားရင်ဆိုပဲ နဲနဲကြောက်လာပြီ၊
ခုလိုမထင်မှတ်ပဲဖြစ်သွားတက်တဲ့သဘာဝဘေးဆိုတော့လည်းဘာမှမတက်နိုင်ပါ၊ ဒါပေမယ့် သိကြတဲ့အတိုင်း ပုထုဇဉ်လူသားပီပီ အထူးဆန်းဖြစ်နေတော့
ကြောက်လည်းကြောက်ညဉ့်လေးကလည်းစပ်စူချင်ဆိုတော့ ငလျင်လှုပ်ပြီဆိုကတည်းက လိုင်းပေါ်ချည်းတက်နေခဲ့တာ ဘယ်ချိန်မှာငလျင်လှုပ်အုံးမှာလဲ၊
(၁) သံကမ္ပိ=သက်၍ သက်၍ တုန်လှုပ်၏၊
(၂) သမ္ပကမ္ပိ= တက်၍ တက်၍လှုပ်၏၊
(၃) သမ္ပဝေဓိ=ဧယာဉ်ကိုလွှဲသကဲ့သို့ နွှဲ၍ နွှဲ၍လှုပ်၏..။
(၁) ဆင်ကဲ့သို့လှုပ်ခြင်း= အနောက်မြောက်ထောင့်မှ အရှေ့တောင်ထောင့်သို့လှုပ်ခြင်း၊
ရာသီအားဖြင့်-မိဿ၊ ပြိဿ၊ ပြိစ္ဆာ၊
ဤ ၃-ရာသီ၌ တနင်္ဂနွေရပ်စဉ်လှုပ်ခြင်း..၊
(၂) ဝက်ကဲ့သို့လှုပ်ခြင်း=အနောက်တောင်ထောင့်မှ အရှေ့မြောက်ထောင့်သို့လှုပ်ခြင်း၊
(၃) မြွေကဲ့သို့လှုပ်ခြင်း= အရှေ့အနောက်လှုပ်ခြင်း၊
မနေ့ကလှုပ်တာလေးကို ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာလေး ကောက်ချက် ချရင် ပိုပြည့်စုံသွားမယ်လို့
မနေ့ကလှုပ်သွားတာ “(၂) သမ္ပကမ္ပိ= တက်၍ တက်၍လှုပ်၏၊” လို့ထင်ပါတယ်၊
နောက်တစ်ခုက..(၁) ဆင်ကဲ့သို့လှုပ်ခြင်း= အနောက်မြောက်ထောင့်မှ အရှေ့တောင်ထောင့်သို့လှုပ်ခြင်း၊
အကျိုးကား-မိုးကောင်းအံ့၊ လူတို့ဝပြောအံ့..။ ပါ။
ကောင်မွန်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့ အနောက်မြောက်ထောင့်ကနေတက်လာပြီးလှုပ်သွားလို့စိတ်ထဲကနေ ကျွန်တော်ကတော့ထင်လိုက်တယ်…။
(၈) ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့သေသိမ်သေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့မပြောဝံ့လို့မပြောတော့ဘူးနော်..ကိုယ်တိုင်သည်သုံသတ်လိုက်တော့..အားလုံးကိုခြုံလိုက်ရင် မနေ့က လှုပ်သွားတာ ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာလို့ယူဆပါတယ်၊
အပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့ ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကများတယ်လေ၊ ဒါပေမယ့်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင်အများကြီးသက်သာနေတာတွေ့မြင်ရပါတယ်၊ဒါတွေကသက်သေတွေလေဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေလိုက်ရတဲ့သူတွေတော့ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါကြောင်းပါ၊ ဒါပေမယ့် အဆိုးထဲကအကောင်းလို့ အကောင်မြင်ကြ၊ တွေးကြရအောင်နော်………။
အခုလို ဂရုတစိုက်ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
ဒီခေတ်ကြီးမှာ .. ငလျင်ဘာကြောင့်လှုပ်တယ်တော်တော်လေးကို တိတိကျကျသိနေကြပါပြီ..။ ဘယ်နေရာတွေလှုပ်တတ်သလည်း.. သိနေပါပြီ..
ဆိုတော့.. ငလျင်ဒေသမှာနေတဲ့လူတွေဟာ. ငလျင်လှုပ်ရင်.. ဘေးအကင်းဆုံး..အသက်သေမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်…. ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါကြောင်း..
simple block model of the first motions of5common types of earthquake
Soonalittle bit of foam rubber along the crack (the fault) will break and the two pieces will suddenly slip past each other. That sudden breaking of the foam rubber is the earthquake. That’s just what happens alongastrike-slip fault.